WOWOW Umqheba omnye weBathroom yeFaucet yeMatte emnyama-IiFaucethi zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo / I-WOWOW i-Handle yangasese ephethe i-Faucet Matte emnyama
WowOW I-Bath Touch Bathroom Faucet Matte Mnyama
I-wowowfaucet izibophelele ekuboneleleni ngeemveliso eziphezulu kunye nezisebenzayo ezinexabiso eliphantsi kwiintsapho, ngokulawula ngokungqongqo umgangatho ukuqinisekisa umgangatho, kwaye ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokusebenzisa, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi ukuphendula imibuzo yakho.
2320700B imiyalelo yokufaka
Ibhafu emnyama yombhobho wokuhlambela matte 2320700B
Ngaba ujonge isitampu sokuhlambela esimnyama esimnyama ukuze unike ukuphakama okugqibeleleyo kwigumbi lokuhlambela lakho? Sukuqhubeka nokufuna! I-WOWOW ikunika elona xabiso lihle lemali xa ucinga loo mathetethi amnyama yokuhlambela inikezela imbonakalo epheleleyo yokuya kwigumbi lokuhlambela. Xa uyila okanye uhlengahlengisa igumbi lakho lokuhlambela, kuya kufuneka ukhethe igumbi lokuhlambela ngobulumko. Okokuqala, ukulingana ngokugqibeleleyo kuyilo lwakho lokuhlambela ngaphambili. Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukuba ubandakanye neefenitshala zakho zegumbi lokuyila kuqala kwigumbi lokuhlambela. Kwaye okwesibini, kuya kufuneka unqande izitayile zakho zegumbi lokuhlambela ukuze ungene ekungeniseni uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lokuhlamba, kuba kuyilo lwegumbi lokuhlambela ezininzi azifakwanga.
Nangona kunjalo, i-WOWOW ikunika ithuba lokuthenga le faucet emnyama ye-matte esemgangathweni ophezulu, kunye nokuthinta okunesitayile ukunika igumbi lakho lokuhlambela isitayela esihle esijongileyo. Kwaye okwangoku, ngexabiso elifanelekileyo lelo liziqhezu nje zokuhlambela zee-brand zeA-brand. Umgangatho wegumbi lokuhlambela le-WOWOW nangona kunjalo ungcono kunezo zinokuthengiswa ziimpawu ze-A. Kungenxa yoko le nto i-WOWOW inomdla wokuchaza ukuba sinikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali kunye negumbi lokuhlambela, kunye nale faucet emnyama yegumbi lokuhlambela.
Umgangatho itafo yokuhlambela emnyama esemgangathweni
Njengoko kuchaziwe, I-WOWOW izama ukukunikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali. Le faucet emnyama yegumbi lokuhlambela ngokuqinisekileyo yeyona nto intle onokuyifumana xa ufuna isitulo sokuhlamba. Itekhnoloji yokulungisa yenzelwe ukuzabalazela ukugqibelela. Ngale ndlela i-WOWOW ikubonelela ngokungcono, ngokusebenzayo, nangaphezulu kwazo zonke iindawo zokuhambisa igumbi lokuhlamba elingenaxabiso. Iifenitshala ezihamba kakuhle kwigumbi lokuhlambela eziya kuphucula umgangatho wobomi bakho, ukuze ubomi bakho bube ngcono.
Obu buchule buhle obuya kuthi uqaphele kwangoko xa ubambe le faucet yokuhlambela ezandleni zakho. Izixhobo ezisemgangathweni ezazisetyenziselwe le faucet emnyama ye-matte yokuhlambela ifanelwe ngumgangatho ophezulu kakhulu. Izixhobo ezifana ne-zinc alloy kunye nobhedu oluqinileyo luqinisekisa ubude bokuphila. Ngaphandle koko, i-cartridge-eqinisekisiweyo ye-NSF engabalulekanga iyimveliso ehlala ihleli. Nge-aerator yayo enobuchule uqinisekiswa ngokuhamba kwamanzi anti-splatter. Kwaye ugcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zamanzi anolu hlobo lwezoqoqosho lokuthena iimpahla zokuhlambela ezimnyama. Le aerator ingashenxiswa ngokulula ngaphandle kokusebenzisa naziphi na izixhobo, ukuze icoceke okanye ithathe indawo yayo endaweni yayo.
Indawo yedatha emnyama yokuncamathela itafile yokuhlambela
Indawo yokufihla isitovu yokuncamathela kwi-matte emnyama yenzelwe ukufakelwa kwe-intshi ezi-4-emngxweni. Isikhenkci sokuhlambela esimnyama esimnyama siza neseti epheleleyo yezixhobo kunye nezixhobo zokufaka. I-Wowow ukuba umzekelo ikwacinga ngeigloves ezisebenzayo zokuzifaka ngokwakho ngaphandle kokonakalisa izandla zakho. Unokufaka ngokulula le faucet emnyama ye-matte yokuhlambela ngokwakho ngaphakathi kwemizuzu engama-3 ngaphandle kokufuna ispingi esibizayo. Ukuba ufuna imigca yokubonelela eyongezelelweyo, ezi zithengiswa ngokwahlukeneyo ukugqiba ukufakelwa kwakho isupu yokuhlambela yonke ngexesha elinye.
Isikhenkci sokuhlambela esimnyama esimnyama iza nesiciko sokucoca umsele. Le ntonga elula yokuphakamisa inakho ukuhambisa amanzi kakuhle, ukuthintela ukuhambisa izandla zakho. Amanzi ahamba ngokulula kwaye ngaphandle kwengxolo ekhathazayo. Ngokuhamba nje okulula kwesandla ungavula okanye uvale isitshixo somsele. Ngaphandle koko, isitya sokudibanisa sidityaniswe kakuhle kwi-faucet emnyama yokuhlambela ngaphandle kokulalanisa kwi-esthetics. Kunqabile ukuba ubambe isiphatho esihle kwaye sibekwe kakuhle ngasemva kwethenki emnyama yokuhlambela.
Itafile yokuhlambela emnyama emnyama
Umbala omnyama omnyama wale mpompo yokuhlambela unikezela ngokongeza kwisitayile phantse kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela. Iipompo zangasese zihlala zithathelwa phantsi ngenxa yobungakanani bazo. Nangona kunjalo, banefuthe elikhulu kwindalo yakho yokuhombisa. Inkangeleko emnyama emnyama eyahlukileyo iyazikhwebula kwi-nickel eqhelekileyo okanye kumgangatho we-chrome. Inika imvakalelo yanamhlanje, ukuphucula isitayile sokuhombisa sangoku. Olunye uncedo lwalo matte umphezulu omnyama kukuba kulula kakhulu ukucoceka nokugcina. Awuyi kungqina naluphi na ushicilelo lweminwe emdaka kumbhobho wamanzi wokuhlambela omnyama.
Ngesiphatho esinye sebheyinti emnyama yokuhambisa igumbi lokuhlambela, unokulawula ngokuchanekileyo umthamo wamanzi kunye neqondo lobushushu ngesandla esinye. Ngale ndlela awunyanzelekanga ukuba usebenzise izibambo ezibini ezahlukeneyo, kwaye uya kuvunyelwa ukuba ulawule ngokuchanekileyo amanzi ngesandla esinye. Uya kuba nesinye isandla sakho simahla eminye imisebenzi, njengokuxubha amazinyo okanye ukuhlamba ubuso bakho. Ngenxa yoko, itepu emnyama emnyama yokuhlambela ibumbekile kwaye ayinakuhlala kwindawo efanelekileyo kwigumbi lokuhlambela. Ke ngoko itompu emnyama yokuhlambela matte lulongezo lokwenyani kuyo nayiphi na indlu yangasese yanamhlanje.
Isiqinisekiso esimnyama sokucheba matte kwigumbi lokuhlambela
Ku-WOWOW siqinisekile ngomgangatho esibonelela ngawo. Siqinisekile ukuba sinikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali onokuyifumana kwintengiso. Umgangatho wethu awucelwanga mngeni kwii-A-brand ezininzi. Ngenxa yoko, uninzi lwee-A-brand zinika nje unyaka-1 wewaranti. Asoyiki ukukunika iwaranti yeminyaka emi-3 egcweleyo ngokuchasene nokuvuza, idriphu, amaqhezu kunye neziphene zokugqiba. Njengoko ubona, siya kuthatha uxanduva lwethu. Ngale ndlela akukho mfuneko yokuba uzixhalabise ngokuqhubeka kokuhambisa amanzi ngaphandle kwengozi. Siza kuthatha umngcipheko ngokupheleleyo, kwaye ukuba itompo yakho yangasese ayinakusebenza ngendlela ekufanele ukuba siyenze, singakuvuyela ukuyibuyisela itompu yakho emnyama yokuhlambela entsha kraca. Isithembiso sethu kuwe.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sikwanikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90. Ukuba awunakwaneliswa ngumbhobho wakho omnyama wokuhlambela matte, siya kukunika imali epheleleyo ngokukhawuleza. Oko kungqina ukuzithemba kwethu kwimveliso yethu. Inani elandayo labathengi behlabathi, bobabini abathengi kunye namashishini, bathembela kwiifompu zethu, kwaye ngaphandle kwesizathu. Sinikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali, kwaye sinethemba lokukuqinisekisa nawe.
Izibonelelo zefeketti yokuhlambela emnyama emnyama ngezantsi:
• Inika i-wow-factor kuyo nayiphi na igumbi lokuhlambela
• Ukugqitywa kwe-matte emnyama
Akukho zprints zeminwe
Elona xabiso liphezulu lemali
• Kulula ukufakela ngokwakho kwimizuzu engama-20
Iwaranti yeminyaka emi-3
I-SKU: 2320700B iindidi: Ukucofa igumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elifanayo, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: igumbi lokuntywila kwigumbi lokuhlambela, chitha indibano, i-intshi esembindini
9.92 x 7.87 x 4.96 intshi